Liquid Filter Mudziyo
Zvokuimba Filter Housing
Kusashanda Carbon Filter Housing
Stainless simbi mvura okuchengetera tangi
Stainless simbi Storage tangi dzinowanzotsigi- kushandiswa kuchengeta mvura muna Food, Beverage, Dairy, Pharmacy, Chemical indasitiri etc. Rinogona kushandiswa sezvo mvura kuchengetwa tangi, Aisanganisa tangi, Mukaka tangi, Brewery tangi etc. Zvagara akagadzirwa Stainless simbi 304 kana 316L, mamiriro kubudikidza Vertical mhando & Horizontal mhando. Product Features ● Volume: 50L-30000L ● Material: SS304 kuvaka ● Vertical chete rukoko mhando ● 150 ° Cone Top & Bottom ● ukobvu: 3mm ● manera yakagadzirwa Stainless simbi ● TOP manhole ● Acce ...
Self rokutsvaira firita
HAFS akatevedzana kuzviremekedza rokutsvaira Sefa, ndizvo chaizvo vakarongeka womukati Kukwesha kuzvidzora rokuchenesa Sefa vakazvimiririra yakataurwa HWAHON. Rwoga dzichibvisa netsvina iri romukati pemvura Sefa chinhu nokuda zvokuimba tichibvisa, izvozvo anoramba filters paInternet. Uye kubvisa yokutsiva basa rinorema Sefa maatomu akafanana, kunze mutengo consumables uye zvakatipoteredza kuchengetedzwa kurapwa. HAFS Sefa zvakare pamwe diki kufurirwa kurasikirwa uye irambe kuerera ari filtration mutoo izvo ...
Cartridge firita Housing
Zvakarurama Sefa (aizivikanwawo kuchengeteka Sefa), humburumbira goko unowanzoonekwa yakagadzirwa Stainless simbi, mukati anoshandisa PP uchanyauka nomukondombera, waya unopfuta, shangu, titanium Sefa, kusashanda kabhoni Sefa nezvimwe tubular Sefa zvinhu sezvo Sefa okunze, maererano siyana Sefa vezvenhau uye The magadzirirwo kwacho asarudza yakasiyana Sefa zvinhu kundosangana effluent unhu zvinodiwa. Performance unhu (1) High filtration zvakarurama uye yunifomu Sefa aperture (2) The firita resis ...
multi-bhegi firita kwedzimba
The bhegi Sefa kwedzimba dziri chaizvo kuti inonzwika apo Mavhoriyamu makuru kana mukuru viscosity mvura, izvo zvakavakwa pamusoro Sefa pokugara, Sefa mabhegi, womukati keji pakutsigira mabhegi, yakanaka chisimbiso urongwa. Zvidzidzo kuuya mureza pamwe Sefa bhegi saizi 02 Stainless simbi restrainer tswanda. Features & Benefits ● High chokubuda prices ● Complete Stainless simbi 304,316L mamiriro ● High tembiricha & High kumanikidzwa magadzirirwo zviripo ● Wide siyana wehomwe kukura nokuda sarudzo ● Nyore yakachena A ...
HWAHON ndiye China kutungamirira nzwisisika maindasitiri filtration kushamwaridzana kwemakore akawanda ruzivo. Tiri specialized panguva rinozvichenesa filtration michina uye muitiro filtration michina. Tinoshumira maindasitiri akadai Petro-namakemikari, nemicheka makemikari, kurapwa mvura, pulp nebepa, motokari maindasitiri, zvokudya uye chinwiwa, zvomumvura, simbi vanoshanda, etc. Our siyana rinozvichenesa filtration michina zvinoshanda yakatsvuka mvura, achiparadzira kutonhora mvura , anonhuwirira, makemikari uye Polymers.
Flowserve Signs zvibvumirano To Ichapa Equipment For Two Large Reverse Osmosis Desalination Projects
DALLAS- (DZEBHIZIMISI å) - Flowserve Corporation, (NYSE: FLS), aitungamirira Akatipa kuyerera kuzvidzora zvinhu uye mabasa kuti yose misika kwezvivako, yakazivisa kuti ichangopfuura nayo gwaro zvibvumirano kupa pfungwa pombi kuti hombe gungwa mvura zviviri neizvi osmosis ( SWRO) desalinatio ...
HWAHON achaita kupinda AQUATECH Amsterdam 2019
Aquatech ndiro shoko kutungamirira wezvokutengeserana kuratidzwa kuti muitiro, kunwa uye tsvina mvura. With pamusoro 1000+ exhibitors, 25,000+ mvura nyanzvi kubva kunyika 140 uye 1000+ Amsterdam International Water Week (AIWW) musangano vacho Aquatech kunosimbisa nzvimbo yacho sezvo munyika kutungamirira chikuva fo ...